Miova hevitra ny vahoaka rehefa ivadihana | NewsMada
Miova hevitra ny vahoaka rehefa ivadihana
Par Taratra sur 16/08/2016
Efa naneho ny heviny tamin’ny fifidianana ny vahoaka. Mila miaritra izay hatramin’ny taona 2018, hono. Tsy tokony hiova hevitra eny an-dalana izany? Na ho jamba sy minia mitampi-maso hatramin’ny farany… Heverin’ny mpitondra efa pahina na tsy mahita inona ny vahoaka amin’izao noho nampidirana azy amin’izao kizo izao?
Eto amintsika, tsy misy firy ny fitsapana hevi-bahoaka. Aiza ho aiza ny mbola fitiavana sy fanohanan’ny vahoaka ny mpitondra? Any amin’ny firenen-dehibe, miankina amin’izay fitsapana hevi-bahoaka izay ny fanovan’ny mpitondra famindra amin’ny fomba fiasany, ny lalan-kizorany; eny, na ny fifandraisany amin’ny vahoaka aza…
Fa tsy anaovana tian-kano tsy tian-kano ny vahoaka hoe tsy hiova hevitra sy hanana ny fitsarany ny mpitondra intsony mandritra ny fe-potoam-piasana manontolo. Ny adala ihany, hono, no tsy mahalala miova hevitra. Ny mpitondra no tsy matoky tena sy tsy marin-toerana noho ny tsy fahombiazana, ny vahoaka avy koa no tampenam-bava.
Ampangaina ho manakorontana sy manongam-panjakana avokoa tsinona izay rehetra mitady haneho hevitra sy hihetsika. Eny, na momba ny tsy fandriampahalemana aza izany, na noho ny delestazy, fidangan’ny vidim-piainana… Mba fantatry ny mpitondra ve hoe mitsoka mankaiza marina ny tena hevi-bahoaka ifotony amin’izao?
Loza iray, loza roa… Terena tsy hiova hevitra tamin’ny fifidianana tsy nazava be ihany na amboletra ny vahoaka, tsy avela haneho hevitra. Amin’izany, miova hevitra eny am-panidinana sy mivadi-balirano amin’izay nifanarahana hoe hotanterahiny, tamin’ny fifidianana, ny mpitondra. Mby aiza avokoa ny fampanantenana… poakaty?
Fanitsakitsahana lalàna isaky ny mihetsika, manombola amin’ny lalàmpanorenana, ohatra, ny hoe fanjakana tan-dalàna? Kolikoly sy kiantranoantrano amin’ny raharaham-pirenena ananan-kavana ny fitondrana tsara tantana? Fivarotan-tanindrazana sy harem-pirenena tantely afa-drakotra ny hoe fampandrosoana?
Mivadika sy mamadika ny mpitondra, tsy mahagaga raha miova ny hevi-bahoaka. Avelao malalaka sy tsapao… raha sahy?